विश्वका धनी खेलाडीकाे सूची सार्वजनिकः काेहली एक सय नम्बरमा, एक नम्बरमा काे ? – Saurahaonline.com
विश्वका धनी खेलाडीकाे सूची सार्वजनिकः काेहली एक सय नम्बरमा, एक नम्बरमा काे ?
चितवन, २९ जेठ । भारतीय क्रिकेट टीमका कप्तान विराट कोहली संसारकै सर्वाधिक कमाई गर्ने खेलाडीको सूचीमा सामेल भएका छन् । काेहली याे सूचीमा पर्ने भारतका एकमात्र खेलाडी हुन् ।
अमेरिकी पत्रिका फोर्ब्सले सार्वजनिक गरेको धेरै आम्दानी गर्ने खेलाडीहरुको सूचीमा उनको नाम एक सयौं स्थानमा छ । गतवर्षभन्दा कोहलीले १७ स्थान तल झरेका हुन् । सूचीको पहिलो स्थाननमा अर्जेन्टिनाका फुटबल खेलाडी लियोनल मेस्सी रहेका छन् ।